कहिले जाला पिरोल्ने बर्खा ? (सिन्धुपाल्चोकका ९ खबर) - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ समाज ∕ कहिले जाला पिरोल्ने बर्खा ? (सिन्धुपाल्चोकका ९ खबर)
कहिले जाला पिरोल्ने बर्खा ? (सिन्धुपाल्चोकका ९ खबर)
Sindhu Khabar सोमबार, २०७८ भदौ २१ / १६:४१
झट्ट बाहिरबाट हेर्दा स्वर्गको कुनै एउटा सानो स्वर्गको उपमा दिन पनि सकिन्छ, सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–३स्थित बोल्दे गाउँ । तर, यही गाउँवासी रातभर सुत्न सक्दिैनन् । कारण हो पहिरोको डर ।
बोल्दे गाउँको मुनी पहिरो गएको छ । जसले गाउँ जोखिममा पारेको स्थानीय बताउँछन् । गाउँ भन्दा मुनी घट्टे खोला र कुन्डिम्राङ बस्ती चिरा चिरा भएको छ ।
उसो त अघिल्लो वर्ष पनि यहाँका गाउँवासी पहिरोको जोखिम बढेर सुरक्षित स्थानमा रात कटाउन नपपुगेका हैनन् । यो वर्ष पनि उही हालत भएको स्थानीय जितेन पाख्रिन बताउँछन् ।
मेलम्ची नगरपालिकाका समाजसेवी प्रकाश श्रेष्ठ सोमबार मेलम्चीबाट काठमाण्डौंको यात्रामा निस्किए । मोटरसाइकलको यात्राबाट राजधानी जाने सुरमा निस्किएका उनी बीचबाटो बाटै फर्कन बाध्य बने । कारण अविरल बर्षासँगै आएको पहिरोले भएको सडक अबरुद्ध ।
मेलम्ची, सीघाट र मेलम्ची, साँखु सडकमा आएको पहिरो जति नै कोसिस गर्दा पनि पन्छाउन नसक्दा हार मानेर मेलम्ची फर्किएको उनले सुनाए । ‘काठमाण्डौंको यात्रा सहज बनाउन सकिएन,’ मेलम्ची फर्किएका उनले भने ।
शनिबार रातिदेखिको अविरल वर्षाले इन्द्रावती– ५ स्थित धुसेनीमा गएको पहिरोका कारण दुई घर जोखिममा परेको छ । घर मुनीबाट झरेको पहिरोले बसोबास गरिरहेको दुई स्थानीयको घर बगाउने सम्भावना बढेको हो । घर जोखिम भएपछि दुई परिवार विस्थापित हुन बाध्य बनेका छन् ।
अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारा, बाह्रविसेलगायत रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा जाने बाटो अवरुद्ध भयो । बनेपाको पुल बजार डुबानमा परेपछि संयौं यात्रु अलपत्र परे ।
मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. १० पैराबारीमा पनि घरमाथिबाट आएको पहिरोले क्षति गरेको छ । भूकम्प प्रभावितका दुई घर र अन्य तीन घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ । पहिरोको जोखिम भयो भनेर पीडितहरुले स्थानीय सरकारलाई नभनेका भने हैनन्, ‘तर स्थानीय सरकारले आँखा बन्द गरिदियो ।’ एक पीडितले भने ।
सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको सिमाना सीमाघाटमा सिपाघाटमा ढाँडखोला बाढीले वितण्डा मच्चाएको छ । स्थानीयका अनुसार बाढीले सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत गरेको छ भने एक बंगुर फर्म पनि बगाएको छ । बंगुर फर्म सञ्चालक सोचित श्रेष्ठकाअनुसार विहान एक्कासी आएको बाढी फर्म भित्र पसेको थियो । फर्ममा १३ बंगुर थिए । ‘१७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर फर्म स्थापना गरिएको थियो ।’
सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको सिमाना सीमाघाटमा सिपाघाटमा ढाँडखोला बाढीले वितण्डा मच्चाएको छ । स्थानीयका अनुसार बाढीले सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत गरेको छ भने एक बंगुर फर्म पनि बगाएको छ । सिपाघाट बजार क्षेत्रमा पनि पानी छिरेको हुदा जोखिम अझै रहेको स्थानीयबासीहरु बताउँछन् ।
गएराति देखिको अबिरल बर्षाले मेलम्ची नगरपालिका १२ र १३ को बिभिन्न ठाँउमा पहिरो जाँदा हेलम्बु राजमार्ग फेरि अवरुद्ध भयो । मेलम्ची नगरपालिका १२ बाहुनेपाटी र १३ मेलम्ची–जिरोकिलो सडक खण्डस्थित फटकशिलामा पहिरो खसिरहेकाले सडक अवरुद्ध भएको हो । प्रहरीका अनुसार मेलम्ची वडा नम्बर १२ र १३ गरेर ३ ठाउँमा पहिरो गएर सडक अबरुद्ध गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष गोल्चेको लिदीमा पहिरो गयो । ३९ जनाको ज्यान गयो । सिंगो गाउँ बग्यो । बचेकाहरु सुरक्षित स्थान खोज्दै सेलाङको बाँसखर्कमा आएर आश्रय लिए । केहीलाई वर्षदिनपछि अस्थायी टहरा सेनाले बनाइदियो । तर, अधिकांश अझै टेण्ट र पालमा आश्रित छन् ।
भिरालो जमिनमा रहेकाहरु सुतिरहेको ठाउँमा पानी बगेर आइपुग्छ । ठूलो पानी पर्दा पाल नै च्यात्न सक्ने जस्ते हुने त्यहाँका पीडितहरु बताउँछन् ।
यी प्रतिनिधि खबर हुन् । यस्ता खबर सिन्धुपाल्चोकमा थुप्रै छन् । केही पीडित आफै बन्दोबस्त गरिरहेका छन् त कतिपय जोखिम स्थानबारे सम्बन्धित निमाय नै अनविज्ञ छ ।
र, उनीहरुलाई जब पानी पर्छ त्यतिबेला पिर सुरु हुन्छ । न कतै बाढी आउने हो कि, न कतै पहडा खस्ने हो भन्ने भयले सताइरहेको हुन्छ ।
गएराति परेको अविरल वर्षाका कारण विभिन्न खोलामा आएको बाढी र पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा फेरि अर्बाैको क्षति पु¥याएको छ । लगातारको वर्षाले आएको बाढी र पहिरोले अरबौंको धानबालीमा क्षति गर्नुका साथै बस्तीहरु जोखिममा पारेको हो ।
त्यस्तै, चाखोलामा आएको बाढीले अरबौैको क्षति पुगेको अनुमान, गरिएको छ । २० बर्षपछि आयो यत्ति ठूलो बाढी आएको र सो बाढी खेतीयोग्य जमिनमा पसेकाले क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको स्थानीयको भनाई छ। सिपाघाट हुँदै आएको बाढीले काभ्रेको मण्डन देउपुरमा सयौ रोपनी धान खेत बगाएको छ ।
२५ लाख धराैटी तिर्न नसक्दा कारागार चलान
बाढीपीडितका पीडा बल्झाउँदै हेलिकोप्टर शयर गर्ने नेता
कपिलेश्वरमा कांग्रेसको सरसफाई